Xaggee ayey marayaan dadaallada uu Qoor Qoor ka wado Koonfur GALBEED? - Caasimada Online
Home Warar Xaggee ayey marayaan dadaallada uu Qoor Qoor ka wado Koonfur GALBEED?
Xaggee ayey marayaan dadaallada uu Qoor Qoor ka wado Koonfur GALBEED?
Baydhabo (Caasimada Online) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) oo maalintii saddexaad ku sugan Baydhabo ayaa halkaasi ka wada wadahadallo la’isugu soo dhoweynayo Koonfur Galbeed iyo Xukuumadda Soomaaliya oo isku qabtay dhammeystirka arrimaha doorashooyinka.
Illaa iyo hadda ma jiro wax natiijo ah oo kasoo baxay wadahadallada socda, iyada oo wararka qaarna ay sheegayaan in aanan weli wax xal u muuqan kara aanan laga gaarin arrinta laga wada hadlayo ee ku aadan khilaafka Rooble iyo Lafta Gareen.
Waxaa weli socda dadaallada xal raadinta a, iyada oo sidoo kale lagu ballamay inay sii socdaan kulamada wadatashiga ah, inta laga gaaro is afgarad ku aadan xiisadaas oo saameyn ku yeelatay wada shaqeynta xukuumadda iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Arrintan ayaa kusoo beegmeysa, iyada oo haatan lagu sii dhowaanayo taariikhda loo qabtay dhaarinta xildhibaanada oo ah 14-ka bisha, taas oo shalay ay markale ku celiyeen Ra’isulwasaaraha iyo guddiga doorashooyinka.
Si kastaba, Koonfur Galbeed oo ka mid ah maamullada taabacsan Farmaajo ayaa horey ugu dhowaaday inay gebi ahaan joojisay wada shaqeyntii kala dhexeysay ra’iisul wasaaraha, taas oo dab kusii shiday xiisadda labada dhinac.